Homeတူရကီအရှေ့တောင် Anatolia ဒေသကြီး21 DiyarbakirDiyarbakir အဝေးပြေးကား Terminal နှင့်ထဲမှာ log များကိုဖြေရှင်းပြဿနာများဖြစ်ကြသည်
30 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 21 Diyarbakir, အရှေ့တောင် Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, တူရကီ 0
diyarbakir အချင်းချင်းပြဿနာများဘတ်စ်ကား input ကို terminal ကိုသဖြင့်ဖြေရှင်းနေကြ
Diyarbakir အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် Diyarbakir တဲ့ Metropolitan ၏မြို့တော်ဝန် Basri Güzeloğluအသွားအလာတစ်ထုံးစံဆန့်ကျင်အတွက်စီစဉ်ထား v.has Diyarbakir အဝေးပြေးကား Terminal နှင့်စစ်ဆင်ရေးအုပ်စိုးဝင်ပေါက်များအားပြန်လည်စီစဉ်အများပြည်သူတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြောင်းသတ်မှတ်ပေးသည် (သွားခဲ့တာ) ။
အချိန်တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ဆုံးရှုံးမပါဘဲဖြေရှင်းချက်ထုတ်လုပ်တိုင်ကြားမှုများနှင့်တောင်းဆိုချက်များကိုနှင့် Diyarbakir အလွန်အရေးပါမှု၏နိုင်ငံသားများ, traffic ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုတစ်ထုံးစံဆန့်ကျင်အတွက်စီစဉ်ထားခြင်းနှင့် Diyarbakir ဖြစ်စေတဲ့ယာဉ်မတော်တဆမှုအဝေးပြေးကား Terminal နှင့်ကုမ္ပဏီ (ကျနော်သွား) က၎င်း၏ input ကိုသက်တမ်းတိုးမည်။ ချစ်ခင်ရပါသောနိုင်ငံသားများအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် Diyarbakir မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဌာနဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Hasan Basri Güzeloğlu'naမစ္စတာGüzeloğluသူတို့ရဲ့တိုင်ကြားချက်တင်ပြရန်နှင့်ဆက်စပ်သောဌာန၏ဦးခေါင်းနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်သူဟာ Re-အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်သွားဘက်ဆိုင်ရာ entries တွေကိုများ၏အစီအမံအောင်ဘို့ညွှန်ကြားချက်ကိုပေး၏။ အဆိုပါစီစဉ်လမ်းမကြီးကို Maintenance ၏Diyarbakırတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ညွှန်ကြားမှုများနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးဦးစီးဌာနသည်အောက်ပါသမားတွေကသူတို့အလုပ်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ သစ်အစအဦးခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဒါရိုက်တာမစ္စတာŞükrüအဆိုပါသုတေသန, Güzeloğluအဆိုပါ patch ကိုနှင့်အတူကြွလာပါဝင်ပတ်သက်အမှုကိုပြုခံရဖို့အလုပ်အကြောင်းကိုထုတ်ပြန်ချက်များဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
Diyarbakir အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနှင့်နိုင်ငံသားများကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်တို့ကိုယခုသူတို့ရဲ့သတင်းစကားများ၏မူဘောင်အတွင်းပြဿနာဖြေရှင်းနည်းများကိုထုတ်လုပ်ကြသည် "စီမံကိန်းရှိရာပြဿနာဖြေရှင်းနည်းရှေ့ဆက်အမှတ်မှာစတင်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်နှင့်မစ္စတာGüzeloğluကနေမျှော်လင့်ထား။ ဘတ်စ်ကားဘူတာ၏အရှေ့ဘက်အတိတ်ဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းကိုယနေ့အလွန်အရေးကြီးသောပြဿနာများကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ လူတိုင်းသိတယ်အဖြစ်တစ်ပြတ်လပ်မှုကြုံနေရခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်နှငျ့ပတျသကျသောအန္တရာယ်များင်ခဲ့သည်, တစ်ဦးအလှည့်အပါအဝင်ကခက်ခဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ entry ကိုများနှင့် traffic ကိုစည်းမျဉ်းများချိုးဖောက်မှုမှထွက်ရန်အောင်ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံမှတိုက်ရိုက် access ကို, ကာကွယ်ပေးသည်။ ဤခေါင်းစဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေအားဖြင့်ငါ့ကိုမှဆက်သွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာဌာနများချက်ချင်းကိစ္စများ၏ဖြေရှင်းနည်း၌အကြှနျုပျတို့၏ညွှန်ကြားချက်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ပေးပြီ။ ယနေ့တွင်လည်းအလုပ်နှင့်အတူစီမံကိန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘတ်စ်ကားဘူတာနှင့်အတူယနေ့စတင်ထုတ်လုပ်အဖြစ်အသွားအလာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချက်များ၌နှစ်ဦးစလုံးသငျ့လျြောမှဝင်ရောက်ခွင့်ဆောင်ရွက်မှုတွေကျနော်တို့လက်လှမ်းနှစ်သိမ့်ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်စီမံကိန်းကိုထွက်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏စီမံကိန်းကိုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယနေ့လမ်းမကြီးအဘယ်သူမျှမကနေ access ကို၌အကြှနျုပျတို့၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုက်ရိုက် access ကိုအတူဘတ်စ်ကားဘူတာရုံမှာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုင်းလင့်များဆံ့ဆက်လက်ဝင်ရောက်ခွင့်များအတွက်အသွားအလာစည်းမျဉ်းများချိုးဖောက်မှုဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်ချက်ကနေပြန်လာနှင့်အတူဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပါတယ် "ဟုသူကပြောသည်။
သူတို့ဆုံးရှုံးနှင့်မစ္စတာGüzeloğluရသောကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်စီမံကိန်းများအတူတူသင်လမ်းမကြီးမှဘတ်စ်ကားဘူတာမှ link တစ်ခုနှင့်အသွားအလာဘေးကင်းလုံခြုံရေးကအရမ်းပျော်စရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် Access ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, traffic ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌တွေ့နိုင်ပါသည်အဖြစ်လာမယ့်ပုံရိပ်နဲ့ထိုအရပ်၌များစွာသောအသွားအလာမတော်တဆမှု, "အခုကျနော်တို့စီမံကိန်းစတင်နေကြတယ်, ထောက်ပြသောဘဝနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ။ Landscaping စီမံကိန်းကိုအတူဧရိယာ၏သမာဓိကိုလည်းပြီးစီးလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံအဝေးပြေးလမ်းမကြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနောက်ကျောလမ်းအတွက်ထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်နှစ်ဦးစလုံးချိတ်ဆက်ဖြစ်နေဆဲကြောင်းမျှော်လင့်ပါတယ် "ဟု၎င်းကပြောသည်။
တမြို့လုံး၏မျက်နှာနှင့်ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံကြောင်းမစ္စတာGüzeloğluထောက်ပြဟန်ပြတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာကိုင်တွယ်, said: "ကျနော်တို့ကအတိတ်ကာလ၌ရှိနှစ်ပေါင်းများစွာဘတ်စ်ကားဘူတာရုံမှာရှည်လျားလွန်းခဲ့မရှိသေးပေမယ့်သန့်ရှင်းမှုစတင်ပါပြီ။ နိဒါန်းဟန်ပြတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာအတူငါတို့မွို့၏လူ့မျက်နှာနှင့်ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံ်ထမ်းဆောင်ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံအဖြစ်ပြင်းထန်မှု၏အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းလာမည့်နှစ်တွင်တစ်ရည်မှန်းချက်ကြီးစီမံကိန်းကိုစတင်ပါ our'll ။ ငါတို့သည်လည်းအများအပြားပြီးသားသိလေဝင်လေထွက်, လေအေးပေးစက်အခြေခံအဆောက်အအုံကင်းမဲ့သည့် 2020 ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်မှာ, အားလုံးထူထောင်မှု်ထမ်းဆောင်သောဤသဘောအရန်ဆောင်မှုများရှိပါလိမ့်မယ်။ နှစ်ဦးစလုံးရှုခင်းဟာအလွန်ရည်မှန်းချက်ကြီးစီမံကိန်းကိုဖြစ်လိမ့်မည်လည်းပါဝင်သည်သောအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုနှင့်တွေ့ဆုံရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေအားလုံး၏သမာဓိသေချာစေရန်နှစ်ဦးစလုံးဒေသများ။ စီမံကိန်း 2020 အတွက်ကျွန်တော်တစ်ဦးရက်အနည်းငယ်တစ်ပါတ်အတွက်ဖြည့်စွက်ပါလိမ့်မယ်, ယနေ့ဤလင့်ခ်မှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းစတင်မီကပင်။ နောက်ဆုံးပေါ်မှာ 1 ရက်သတ္တပတ်ကျနော်တို့လုံခြုံ access ကိုရပါလိမ့်မယ်။ "
ကြှနျုပျတို့အားလုံးတောင်းဆိုချက်များကိုသူတို့ကိုအစေခံရန်ကိုယ်စားဆန္ဒရှိသော်လည်းနှင့်မျှော်လင့်ချက်များချက်ချင်းနိုင်ငံသားများကျနော်တို့အဖြစ်အရေးကြီးသောတွေ့ဆုံရန်, ငါရွှေကိုထပ်ဆွဲပါလိမ့်မယ် "သူတို့ကအမှုဆောင်ဖို့ပြင်းထန်သောအားထုတ်မှုအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြသည်သောနိုင်ငံသားများနှင့်မစ္စတာGüzeloğluအပေါငျးတို့သတောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းကျနော်တို့အနေနဲ့ပြင်းထန်သောအားထုတ်မှု၌ရှိကြ၏။ ယင်း၏အဆောက်အဦအပေါငျးတို့သနောက်ကွယ်မှတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ရဲ့ဆုံးရှုံးခဲ့ရအားလုံး၎င်း၏အရင်းအမြစ်များကို
ကျနော်တို့စိတ်ထဲအတွက်အချိန်ဘောင်ကိုလည်းအလွန်လျင်မြန်စွာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ရည်ရွယ်အသုံးပြုပါ။ ယနေ့ငါ starting ကိုအကောင်းဆုံးအလုပ်အလိုရှိ၏။ အလုပ်သမားများလုပ်အားငါ့အလိုရှိသမျှညီအစ်ကို, ညီအစ်မကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာများမှလှူဒါန်းခဲ့သောသူအပေါင်းတို့သည်လွန်သွားပါလိမ့်မယ်, ငါကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်ပင်သာယာအရာရှိများက "ဟုခံရဖို့အလုပ်စတင်ခဲ့သောကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်သူမည်သူမဆိုများအတွက်အကောင်းဆုံးအလိုရှိ၏။
အဆိုပါမိန့်ခွန်းပြီးနောက်လမ်းကို Maintenance နှင့်ရှေ့သွားဘက်ဆိုင်ရာအတွက်လမ်းဘေးပေါ် မူတည်. အခြေခံအဆောက်အဦဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးဦးစီးဌာနအသင်းများ Diyarbakir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ညွှန်ကြားမှုသူတို့ရဲ့စက်တွေကိုဖျက်ဆီးအလုပ်လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
Diyarbakir အဝေးပြေးကား Terminal နှင့် gleaming 27 / 09 / 2019 မြို့တော် Terminal နှင့်စစ်ဆင်ရေးမှာ Diyarbakir အဝေးပြေးကား, (သူသွား) ကိုညဥ့်စွန့်ပစ်ကျောက်ခင်းရှေ့တွင်စဉ်အတွင်းဧရိယာကင်းရှင်းထင်ဟပ်နှင့်ရေနှင့်အတူဖိအားလမ်းများဆေးကြော, နံနက်ယံ၌နိုင်ငံသားများ၏ဘုံအသုံးပြုမှုDiyarbakırတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, သူသည်လွှာများနှင့်တန်ဆာဆင်ကန်၏သန့်ရှင်းရေးသဘောပေါက်လာတယ်။ Dist တစ်ဦးထံမှ Z ကိုမှမြို့တော်ရဲ့မှန်သန့်ရှင်းရေးစစ်ဆင်ရေးလုပ်ရသော Diyarbakir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးဌာန, တစ်ဦးသန့်စင်မြို့အဘို့အလုပ်ကိုင်ဖို့ဆက်လက်။ ယာဉ်အသွားအလာထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့စီးဆင်းမှုနှင့်အလုပ်လယ်အဖြစ်ပထမဦးဆုံးအသင်း, သန့်ရှင်းရေးမှညဥ့်နက်ထဲမှာစတင်ကိုအသုံးပြုပြီးမော်တော်ယာဉ်ကနေပစ်ချလမ်းရှင်းလင်းသူများအမှိုက်သရိုက်တွေနဲ့သန့်စင်ဖွံ့ဖြိုးခဲ့သည်။ စွန့်ပစ်စွန့်ပစ်ခြင်း၏ပြဌာန်းချက် ...
ဘတ်စ်ကား Terminal နှင့်ဆောက်လုပ်ရေး bilecik စတင် 13 / 04 / 2014 Bilecik အဝေးပြေးကား Terminal နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအပေါ်စတင်: Bilecik မြူနီစီပယ်အဆိုပါအဝေးပြေးကား Terminal နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်မှသက်ဆိုင်ရာမြှို့နယ်ဖြင့်ကြေညာချက်, အားဖြည့်ကွန်ကရစ်အစ္စတန်ဘူလ်-Adapazari İnbayır၏ဆင်ခြေဖုံးတွင်လက်စွပ်လမ်းနှင့်သံမဏိဆောက်လုပ်ရေးနည်းစနစ်ဘတ်စ်ကားဘူတာနှင့် တွဲဖက်. built-in ပါလိမ့်မည်ထိုသို့တူးဖော်အလုပ်စတင်ကပြောကြားသည်။ terminal ကိုအော်တိုမန်ဗိသုကာနှင့်အတူဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည်အစ္စတန်ဘူလ်အစ္စတန်ဘူလ်, တူရကီ, Eskisehir, Kocaeli, မှတ်တမ်းတင်ထားသောကြေညာချက် "အထူးသဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောအစ္စတန်ဘူလ်အဖြစ်မြို့ပြမြို့ကြီးများအတွက်ကျယ်ပြန့်သောဧရိယာနှင့်အတူအားလုံးကြောင်း 50 တထောင်စတုရန်းမီတာနိုင်ငံအားလုံးနှင့်အတူဆက်သွယ်မှုများကိုပါလိမ့်မယ်, နှင့်အရာ7တထောင်စတုရန်းမီတာအပေါ်ကျင်းပလိမ့်မည် အရာက Bilecik ၏ခရီးဝေးသဘောသဘာဝအဘို့ကြီးစွာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် ...
သက်တမ်းတိုးနေ့အကြို Izmit အဝေးပြေးကား Terminal နှင့် 28 / 08 / 2017 Izmit အဝေးပြေးကား Terminal နှင့် 10 နေ့ကမနက်စောစော Al-Adha ကြောင့်အားလပ်ရက်ချိုမြိန်၏ကသီကြုံနေရသည်။ ကြီးမြတ်အရေးပါမှု၏ကြီးမြတ်ပြင်းထန်မှုခရီးသည်လုံခြုံမှုနှင့်နှစ်သိမ့်ကြုံနေရကြောင်း terminal ကိုမတိုင်မီနေ့။ ထိုကဲ့သို့သောသန့်ရှင်းရေးအဖြစ်အများအပြားဒေသများအတွက်တီထွင်မှု Izmit အဝေးပြေးကား Terminal နှင့်နှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးထောက်ခံမှုအဓိကအားလုံခြုံရေးပြုမိခဲ့သည့်ကျော်ကပန်းခြံမြို့တော်မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုလက်အောက်ခံ။ Terminal နှင့်အတွင်းတံခါးကအရေအတွက်မှာနှစ်ဦး၏မူဘောင်အတွင်းလုံခြုံရေးအစီအမံများ download လုပ်ပါကခေတ်သစ်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ်များကိုတပ်ဆင်ထားပြီ။ လုံခြုံရေးအစီအမံများတင်းကျပ်ခဲ့သည်နောက်လာမည့်ဖို့ terminal ကို၏အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ဝေမျှအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အသန့်ရှင်းရေး။ တိုးမြှင့်လုံခြုံရေးအစီအမံတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ရှေ့မှာနှင့်နိုင်ငံသားများ Izmit အဝေးပြေးကားများ၏ပြင်းထန်မှုကြုံနေရပြီးနောက်ပှဲခဲ့ ...
Bursa အဝေးပြေးကား Terminal နှင့်, ထိုပြဿနာကိုအဆုံးသတ်ရန်ပါဘူး! 23 / 01 / 2018 အတူတူ Alinur Aktas ထံမှအရာရှိများနှင့်ပြီးခဲ့သည့်လကBurulaşမှ General Manager Mehmet Kursat Çaparနှင့်မြို့တော် Bursa တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် terminal ကိုဒီမှာကျင်းပမယ့်အစည်းအဝေးမှာ tradesmen ၏တောင်းဆိုချက်များကိုစကားကိုနားထောငျခဲ့သညျ။ Bursa ဘတ်စ်ကား Terminal နှင့်ကုန်သည်များနှင့်အလုပ်သမားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးနှင့်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးအစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌYılmazပူးတွဲမှု, Aktas တင်ပြ terminal ကိုအတွေ့အကြုံအခက်အခဲများနှင့်ဆက်စပ်သောဖိုင်တစ်ဖိုင်, ဆောက်လုပ်ရေး၏ဗလီပြီးစီးသူကယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကို၏မြင့် overhead နှင့်ဦးစားပေးပြဿနာများကြောင့်စျေးဝယ်စင်တာ terminal ကိုဝင်ပေါက်မှာကြုံတွေ့ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ မြို့သူမြို့သား Aktas, ဘုံသဘောမျိုးကိစ္စများနားထောင်ရန်လက်သမားအတူတစ် terminal ကို Alinur သောအရေးအပါဆုံးလူနေမှုသက်ရှိဖျောဘတ်စ်ကားဆိပ်ကမ်း7/ 24 အဆိုကို ...
Buca - Onat လမ်းဘတ်စ်ကား Terminal နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် Access ကိုလမ်းမစီမံကိန်း 22 / 08 / 2014 အစ္စတန်ဘူလ် BB Buca - အဝေးပြေးကား Terminal နှင့်နှင့် Ring ကိုလမ်းမ Onat လမ်း Connection ကိုလမ်းမအလေ့အကျင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု Project မှအောင် - Izmir တဲ့ Metropolitan သည့်မြူနီစီပယ် "Buca ကဆောင်ရွက်ဘို့စာချုပ်ဖက်စပ်နှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် Onat Street Journal နှင့်အဝေးပြေးကား Terminal နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် Access ကိုလမ်းမစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်းများနှင့်အတိုင်ပင်ခံန်ဆောင်မှုတင်ဒါအနိုင်ရ အကြံပေးဝန်ဆောင်မှု "အသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု၏ဝယ်ယူရေးတှငျမှတျတမျးတငျထားသခဲ့ကြသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်တင်ဒါအနိုင်ရအကြောင်းကို 4.782.398 စရိတ်ပေါင် Protek စီမံကိန်းအဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည် - BSA နိုင်ငံတကာအင်ဂျင်နီယာမကြာသေးမီက 1.632.000 ပေါင်နဲ့ဖက်စပ်မှတဆင့်စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ (OK ကို)
ဘတ်စ်ကား Terminal နှင့်ဆောက်လုပ်ရေး bilecik စတင်
သက်တမ်းတိုးနေ့အကြို Izmit အဝေးပြေးကား Terminal နှင့်
Bursa အဝေးပြေးကား Terminal နှင့်, ထိုပြဿနာကိုအဆုံးသတ်ရန်ပါဘူး!
Buca - Onat လမ်းဘတ်စ်ကား Terminal နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် Access ကိုလမ်းမစီမံကိန်း
ရွှေမပြတ်မတောက်၏လေ့လာမှုမှာအဝေးပြေးကား Terminal နှင့်အဆောက်အအုံ Continues ခဲ့သည်
ကြောင်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဆားကစ်ထုတ်လုပ်ရန်ကြည်းတပ်အဝေးပြေးကား Terminal နှင့်